အမေးအဖြေများ - Xi'an Homey နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Waterproofing geosynthetics ပစ္စည်း
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ Xi'an, Shaanxi ပြည်နယ်, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့အခမဲ့နမူနာပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်ကုန်တင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
A: နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက် 5000 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေ T / T, Western Union, L ကို A / C ...
ဖြေတစ်နေ့လျှင် 5000-7000 စတုရန်းမီတာ: ထုတ်လုပ်မှုအချိန်များသောအားဖြင့် 3-5 ရက်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုကုန်ကျသည်။
reverse Osmosis ငန်ရေနှင့်ရေငန်များပါဝင်သည်အရာကိုလည်းစည်ပင်သာယာသတင်းရပ်ကွက်များအဖြစ်လူသိများ water.tap ရေအများဆုံးအမျိုးအစားများအတွက်စံပြရေကုသမှုဖြေရှင်းချက်, undergroundwater ဖြစ်ပါသည်။ ဤသုံးပါး types များအကြားအကြီးမားဆုံးဂုဏ်ထူးတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားများ၏စုစုပေါင်းကပ်သီးကပ်သတ်အစိုင်အခဲ (TDS) အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ လက်မ၏စည်းကမ်းအတိုင်း, အမေရိကန်ကနျြးမာရေးအသင်းမှသောက်သုံးရေ 2,000 အောက်မှာ ppm TDS.Reverse osmosis မကြာခဏခိုင်မာသောလျှော့ချဖို့တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါရေပတ်ဝန်းကျင်, ဒါမှမဟုတ်သတ္တုပိုက်များအတွက်ခရီးသွားများထံမှရေ၌အပ်နှံသည့်အပျက်အစီးများအတွက်အသုံးပြုသည်ကြောင်းလိုအပ်သည်။ စုစုပေါင်းဖျက်သိမ်းစိုင်အခဲသူတို့ဆားငန်ရေသွင်းစဉ်းစားရမည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဆား၏ကြီးမားသော volumes ကိုမဆံ့, ဒါပေမယ့်မရအဓိပ်ပာယျမကြာခဏငန်များမှာရေထိပုတ်ပါရေ systems.Underground လှောင်ကန်ထဲမှာမကြာခဏရေသန့်စင်တဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရေအများဆုံးမကြာခဏစိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သန့်ဖြစ်ပါသည်, သတ္တုတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်း။ ထူးခြားတဲ့သတ္တုပေါင်းစပ်မကြာခဏအနေနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အရသာရှိသည်ကြောင့်မြေအောက်ရေလည်းပုလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်စျေးကောင်းပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆားငန်ရေပြောင်းပြန် osmosis (တစ်ခါတစ်ရံ desalination အဖြစ်ရည်ညွှန်း) သောက်ရေသို့ရေငန်များပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာရေ 45,000 ppm TDS အထိရှိပါတယ်။ desalination ၏အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုမှုလတ်ဆတ်တဲ့ရေကိုပုံမှန်ပေးဝေကင်းမဲ့ကြောင်းဒေသများရှိရေပေးလာကြ၏။
ဒါဟာအစာကျွေးခြင်း, ရေအချိန်မတန်မီ failure.The အမြှေးပါးရေဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပေမယ့်မျက်နှာပြင်မှာဖျက်သိမ်းစိုင်အခဲ၏ 99% အထိပယ်ချတဲ့စိမ်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေတဲ့ fouling ထံမှအမြှေးပါးကိုကာကွယ်ပေးရန် preconditioned ခြင်းကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါဖျက်သိမ်းဆားသူတို့စွန့်ပစ်ရန်ဆေးရုံကဆင်းတဲ့ရေ (ဆားရည်အိုင်စီး), ငြင်းပယ်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ကြိုတင်အမှုအရာကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာ ro စနစ် ro စနစ်လည်ပတ်ဆက်လက်အဘယျသို့က do.As ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ပေးခွင့်ပေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်, အစာကျွေးခြင်း, ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်ဆိုင်းငံ့စိုင်အခဲဟာအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်စုပြုံလေ့ရှိပါတယ်။ ဤအစိုင်အခဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့နေတယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်ဆုံးမှာ throughput ၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ထိုအမြှေးပါးမှတဆင့်ရေကျမ်းပိုဒ်ကန့်သတ်ရန်။ (ထိုအမြှေးပါးများ၏ throughput စွမ်းရည်လေ့ပု flux မှုနှုန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်, တစ်နေ့လျှင်အမြှေးပါးမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏စတုရန်းပေနှုန်းဂါလန်အတွက်တိုင်းတာ။ )
အဆိုပါ ro feed ကိုရေတစ်အသေးစိတ်ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (LSI, SDI, ဒါမှမဟုတ် CFI) အလားအလာ foulants ဖော်ထုတ်ဘို့ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကခိုင်မာသော (ကယ်လစီယမ်နဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်), ဘေရီယမ်, စထရွန်တီ, alkaline, သော pH များနှင့်ကလိုရင်း၏တိုင်းတာခြင်းများပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေဒေတာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်စနစ်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်
စကေးနှင့်သိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏သဘောထားကို minimize နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် flux မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အမြှေးပါးခင်းကျင်း။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့် ro များအတွက်တိကျသော pretreatments ဆုံးဖြတ်သည်?
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: တဦးတည်းစကားလုံး၌တည်၏။ ရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအရင်းအမြစ်ကွဲပြားခြားနားကြောင်း, သင်ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိသည်သည်အထိသင့်ကိုရေ၌ဖွင့်အရာကိုသိဘူး။ အဆိုပါရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, LSI, SDI, ဒါမှမဟုတ် CFI တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့် ro စနစ်များအတွက်တိကျသော pretreatment လိုအပ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ရေရိက္ခာတဦးတည်းတည်နေရာမှအခြားမှသိသိသာသာကွဲပြားကတည်းကချင်းစီ pretreatment လိုအပ်ချက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ယင်းအစာကျွေးရေ ro အားဖြင့်ပျော့ပျောင်းဖို့လိုပါသလား?
ion လဲလှယ်သည့်အမြှေးပါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဓာတ်သတ္တုစကေးဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အလားအလာနူးညံ့ပြော့ပျောင်းနှင့်လျှော့ချများအတွက်ရေပန်းစားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ion လဲလှယ်ပျော့အမြှေးပါးဒြပ်စင်မှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဘေရီယမ်, စထရွန်တီ, သံနဲ့လူမီနီယမ်အဖြစ် scaleforming အိုင်းယွန်းအစားထိုးရန်ဆိုဒီယမ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ အလွယ်တကူကို Reverse Osmosis စနစ်အားဖြင့်ပယ်ချနေကြသည်နှင့်အလွယ်တကူအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သတ္တုအကြေးခွံဖွဲ့စည်းရန်ဘူးသောဆိုဒီယမ်ပုံစံများကိုအလွန်ပျော်ဝင်ဆား, ။ တစ်ဦးက sodiumcycle ပျော့ပြောင်းဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဆားရည်အိုင်နှင့်အတူ regenerated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုန်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး, အပျော့ပြောင်းလြျှောရေနှင့်အတူဖြုန်းဖို့ဆေးရုံကဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအိုင်းလဲလှယ်သည့်ကုသရေ၌မြင့်သောသတ္တုအကြောင်းအရာများကိုရှိသည်သော application များအတွက်အကြံပြုသည်ကွောငျ့ဤအမှုဖြစ်ပါသည်။
အက်ဆစ်ဖြေရှင်းချက်အမြှေးပါးအဘို့ကောင်းသောမဟုတ်သကဲ့သို့ caustic ဖြေရှင်းချက်အမြှေးပါးဒြပ်စင်မှအညီအမျှထိခိုက်ဖြစ်ကြသည်။ အက်ဆစ်ဆေးထိုးသော pH ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အစာကျွေးခြင်း, ရေ၏စကေး-ဖွဲ့စည်းသဘောထားကို minimize ဖို့ ro pretreatment သည့်စနစ်သို့ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ LSI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆားရည်အိုင်စီး၏သဘောထားကိုဖွဲ့စည်းအတိုင်းအတာ +0,3 အထက်တွင်လျှင်အက်ဆစ်ဆေးထိုးညွှန်ပြနေသည်။ ဆာလဖျူသို့မဟုတ်နှင့် Hydrochloric acid ကိုဖြစ်စေဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး antiscalant အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
Antiscalants သည့် Ro အမြှေးပါးများ၏ဓာတုစင်ကြယ်သောအကြားကြားကာလသက်တမ်းတိုးရေးအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြပြီ။ ထိုထုတ်ကုန်ယေဘုယျအားအော်ဂဲနစ်ဖော့စဖိတ်, organophosphates နှင့်စွန့်ကြဲထည့်သွင်းရန်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ တချို့က Antiscalant အဆိုးကြိုတင်မီဒီယာ filter များမှစီးတက် dosed စေခြင်းငှါစုံလုံပိုလီမာတွေနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မပိုလီမာများနှင့်စွန့်ကြဲတရားစွဲဆိုဆံ့။ အဆိုပါ Antiscalant သည်ဤပိုလီမာတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်, မဟုတ်ရင်, ထိုတုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အမြှေးပါးပုပ်ပါလိမ့်မယ်။
fouling ကနေ system ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့် flux ဆုံးရှုံးဖို့အားလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများရှိနေသော်လည်းနောက်ဆုံးမှာအမြှေးပါးဓာတုသန့်ရှင်းရေးမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက welldesigned ro စနစ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်သန့်ရှင်းရေးနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်မှုအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်ဓာတုအကြံပေးအဖွဲ့, ဖြေရှင်းချက်အပူပေးစက်, recirculating စုပ်စက်, ရေနုတ်မြောင်း, ရေပိုက်, နှင့် ro module တွေတစ်ပြီးပြည့်စုံသောဓာတုသန့်ရှင်းရေးပြီးမြောက်မှုအတွက်လိုအပ်သောအခြားကွန်နက်ရှင်နဲ့ fittings ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။